Nooca iyo qaabka loogu talagalay haweenka uurka leh 2017 - dharka xagaaga iyo maydhashada, dharka casriga ah iyo dharka nacnaca
Fashion for haweenka uurka leh 2017 - dharka ugu quruxda badan ee hooyooyinka mustaqbalka
Sugitaanka ilmaha waa sugid iyo mudo soo noqnoqonaysa oo u baahan in si gaar ah loo eego caafimaadka iyo qaab nololeedka, lakiin xitaa wardrobe. Hase yeeshee, tani macnaheedu maahan in gabdhaha ku jira booska ay aad u xaddidan yihiin doorashada dharka. Fashion for haweenka uurka leh 2017 waa noocyo kala duwan oo isbeddel cusub oo gacan ka geysanaya in ay sii wataan jilicsanaanta, xiisaha iyo quruxda leh.
Dharka Dharka Xoolaha ee Haweenka Uurka leh 2017
Qeybta ugu muhiimsan ee sawirka jilicsan ee haweenka moodada ah ee jagada ah ayaa ah qaababka casriga ah. Taas macnaheedu maaha in dharka isgaadhsiinta gaarka ah uu shaqeynayo mudada sugitaanka. Habka casriga ahi wuxuu bixiyaa xalal xiiso leh oo loo isticmaali karo xitaa kadib dhalmada. Dhaqdhaqaaqa isboortiga ee haweenka uurka leh 2017 - waxqabadka, raaxada iyo asalka. Faahfaahinta noocaas ah waa in ay u dhiganto sifooyinka noocaas ah:
Dharka . Xilliga cusub, isbeddellada ugu quruxda badani waxay ahaayeen jimicsi jilicsan oo leh xargo iyo xariir jilicsan iyo jajabyo aan kala sooc lahayn.
Leggings . Suufiyeyaasha lagu raaxeysto oo la taaban karo oo leh boqolkiiba halboolka elastane ee maaddada ayaa loo tixgeliyaa doorasho aad u jecel muddada sugitaanka oo dhan.
Fashion for tunics ee haweenka uurka leh . Mid ka mid ah doorashooyinka ugu sarreeya ee qaybta sare ee muuqaalku waa mid bilaash ah oo bilaash ah ama midabka A-qaabeeya. Xalka xal kale ee ururinta ugu dambeysa waa shaati yaryar oo dabiici ah oo daboolaya miskaha.
Gardarrada sare. In noocyo kala duwan oo ah jackets quruxsan iyo qurux badan, jackets hoos iyo roobabka, ugu caansan yihiin yihiin dookha iyo trapezium. Xadhigaani waxay si fiican u qeexaysaa naqshadda iyo dheddigga dibadda.
Dhar for haweenka uurka leh 2017
Gabdhaha booska marwalba waxay u muuqdaan kuwo dumar ah, jaceyl iyo jilicsan. Iyo in la sii xoojiyo sifooyinka noocaas ah, xulashada habboon ee dharka ayaa ah dharka quruxda badan ee haweenka uurka leh ee 2017. Isbedelka, qaababka adag ee xoogga saaraya calool gaaban. Noocyada qarinaya sifooyinka shakhsiga - trapezoid, hoodie, la jarjarey dherer sare. Xilliga jiilaal, dharka caanaha ayaa noqda mid ku haboon. Dharka qaboobaha diirran - isku-dheelitirnaan aad u fiican ee raaxada iyo naqshad naqshada ah. Dhar jilicsan oo dharka dheddigga ah ayaa lafdhabar u ah garbaha, shuftada iyo boodhka, gacmo gashiga ¾.
Dharka daahirsan ee haweenka uurka leh 2017
Si aad u kala bixisid muuqaalka maalin kasta oo aad ku sii jirtid, dharbaaxo quruxsan waa mid aad u fiican. Qalabyada cusub ee aruuriyaasha waxay soo bandhigaan qaabab kasta oo dherer ah - mini, midi, maxi, asymmetry, transformers. Sambab iftiin iyo xariir khamri ah ayaa si taxadar leh u buuxiya basasha khatarta ah ee haweenka uurka leh xagaaga 2017. Wakhtiga qaboobaha, dharka iyo dhogorta dhirta qaab dhismeedka trapezium dheer iyo qorraxda midi waxay noqotaa mid miireysan. Doorashada guud waa calaacal qalin jilicsan oo jilibka ah, oo ay ku xiran tahay suunka baloogan ee suunka ah ama dhammaadka sare ee dheelitirka.
Jeanska loogu talagalay haweenka uurka leh 2017
Naqshadeeyayaashu ma aysan seegin nacfiyada caalamiga ah ee loo yaqaan 'pants'. Jeermiska raaxada leh ee loogu talagalay haweenka uurka leh ee 2017 ayaa lagu soo bandhigay qaansooyinka maalin walba raaxada leh. Haweenka ugu firfircoon ee firfircoon ee xayeysiinta ah waxay dooran karaan saaxiib quruxsan oo xor ah oo qurux badan leh oo qurux badan leh oo qurux badan leh. Nooc kasta oo muuqaal ah iyo xuduudaha shaxanka, xal fudud iyo calaamad dhuuban ayaa weli ah xal guuleysi ah. Ha lumin tixgelinta iyo dheelitirka guud. Qodobka dheeriga ah ee qaan qafiifka ah ayaa ka caawin doona qaababka midabka. In fashion, acid iyo monochromatic acid ah, iyo sidoo kale naqshadeynta daabacaadda.
Sareeye haweenka uurka leh 2017
Furo dharka xagaaga waa dhar raaxo leh oo qurux badan oo gabdhaha ku jira. Dharka quruxda leh ee loogu talagalay haweenka uurka leh ee 2017 waxaa lagu soo bandhigaa qaabab adag oo ah dhar dhar ah, moodooyinka loo yaqaan 'denim', qurxinta fiidka ee kabaha, xargaha iyo xargaha. Wakhtiga diiran, noocyada kala duwan ee alaabta furan waa mid aad u weyn. Dharka xagaaga loogu talagalay haweenka uurka leh 2017 oo leh silhouette loo xiray iyo midab duulaya ayaa soo kabanaya sawirka jilicsan. Wixii maalin firfircoon ee xiran, sarafyada suufka ah ayaa ku haboon dabaqa. Iyo in la xoojiyo sumcadda iyo astaamaha qaabka, u fiirso moodooyinka ku yaal garbaha iyo adigoon xajin karin.
Moodooyinka 2017 ee haweenka uurka leh
Haddii aad isku dayayso inaad qariso jagadaada xiisaha leh, markaas xalka ugu fiican wuxuu noqon doonaa xirmo xiran. Moodooyinka noocan oo kale ah ayaa lagu soo bandhigaa qaab taangiyadeed gaar ah iyo dhar dabbaalan. Sawirada jinsiga ugu weyn ee haweenka uurka leh xagaaga 2017 waxaa lagu dhejin doonaa muraayado furan oo leh bando, halter, oo gaaban iyo gaaban gaaban. Muuqaal, midabyo dhalaalaya oo qurux badan, daabacaad xayawaan iyo xashiub ah, isku-dhafanaanta naqshadaynta midabka oo aan midabada lahayn iyo dhoobada.
Habeenkii Xilliga Haweenka Uurka leh 2017
Casriga casriga ah wuxuu ku adkeysanayaa in gabdhuhu ay tahay inay noqdaan kuwo firfircoon sida ugu macquulsan. Habka ugu fiican ee lagu hayo xaaladdan ma aha inaad iska ilaaliso naftaada inaad jiifsato sariirta, laakiin inaad waqti ku qaadato xafladaha iyo dhinacyada. Gardarrada ugu habboon ee xaaladaha noocaas ah waxay noqon doonaan dhar cad oo loogu talagalay haweenka uurka leh ee 2017. Xaaladaha muraayadda ee muraayadda iyo xajmiga leh khudbadda sare ee dhexda iyo qulqulka dheer ee qaabka Giriiga . Si loo xoojiyo shakhsi ahaaneed, naqshadeeyayaasha waxay bixiyaan fiidkii habeenkii oo dhan oo ka sameysan suuf, silk iyo xargo.
Nooca loogu talagalay haweenka uurka leh 2017
Casriga casriga ah waa noocyo badan oo kala duwan. Sidaa darteed, iyada oo aan loo eegin qaab-nololeedka iyo hawlaha maalinlaha ah, way fududahay in la sii wado qurux iyo qurux. Ilaa hadda, dharka sheyga loogu talagalay haweenka uurka leh ee 2017 waxaa matalaya quruxda iyo asalka dhabta ah jihada kasta:
Fashion Fashion ee Haweenka Uurka leh . Sannadkan, naqshadeeyayaasha ayaa aad u jilicsanaa baaxadda xeerarka labiska ee fashionistas ee booska. Isku dhafka shaati cad iyo kildhiyada caadiga ah halkii ay ka heli lahaayeen suxuunta calool-xumada leh. Isbahaysiga dharka adag iyo jacket ayaa noqday doorasho caan ah.
Fashion jacayl dumarka uurka leh . Qaansooyinka naas-nuujiya ayaa ah dabeecadda helitaanka alaabta. Dharka muraayadaha, dharka, surwaalka gaaban iyo hawada hawada ayaa ah mid la jaan qaadaya koofiyad ballaadhan, qurxiyo waaweyn, gacmo-gacmeed qurxiyaan.
Dharka Wedding ee Haweenka Uurka leh . Dharka ugu quruxda badan ee aroosadda waxay ahaayeen moodooyinka laga sameeyey xargaha iyo xariir khamri ah. In isbedelka, qaababka duulimaadyada dheer ee dhulka iyo midiyoo la jaray.
Sawirada muuqaalka ee haweenka uurka leh 2017
Isbeddelada dhowaan waxay soo jeedinayaan kala duwanaansho muuqaal ah muuqaalka dumarka moodada maalin kasta. Awoodda tijaabinta isugeynta gardarrada waxay ka caawisaa inay joogaan inta lagu jiro uurka oo isbeddel ah oo u dhiganta isbeddelada hadda ee fashion. Hase yeeshee stylists waxay muujinayaan qaansooyinka ugu sarreeya ee haweenka uurka leh 2017:
Glamor . Arin soo jiidasho leh oo ka socota isbeddelkan ayaa ahaa dhar dhogor dhogor ah iyo palette midab casaan ah. Walxaha noocaas ah ee sawirka haweeneyda uurka leh waxay xoojinayaan dumarka, jilicsanaanta iyo jilicsanaanta.
Habka nalka leh . Xaqiiqada xilli ciyaareedka cusubi waxay ku xiran tahay muujinta. In fashion, qaansooyinka monophonic dhalaalaya iyo xalal kala duwan ee sal u ah iyo daro.
Image image Dhibaatooyinka ugu caansan ayaa kala soocay habka Kazhuala. Jihadaani waa wax aan la qeexi karin - halkan ayaa ka muuqda, ciidan , qoraallada ninka, avant-garde, naxdin iyo xitaa gardaro.
Dharka Xilliga Xilliga Xagaaga ee 2017 - dharka xidhan ee xilli ciyaareedka cusub?
Dharka - Moda 2016
Garaacis la jeexay 2014
Dharka ka soo jeeda kalluunka de chine 2013
Dharka quruxda badan - xagaaga 2016
Kawaska - isbedelka moodooyinka 2016
Ciddiyaha hore ee caan ku ah 2015
Jeanska Fashionable 2015
Xilliga Dayrta ee Dumarka
Waa maxay jiilaalka xilligan qaboobaha ah?
Kabaha casriga ah 2013
Taageerada ugu sarreeya ee 2013
Ka samee dhar cad
Meelaha Allergy ee ugu Fiican
Dagaalka dirxiga ee duqsiyo May ee on strawberries
Joodar buluug madow
Cudurada Honeysuckle iyo xakameyntooda
Jabka jilicsan ee qanjidhada naasaha
Maxuu cunugu u cabbaa biyo badan?
Waa maxay taranka, iyo sida loo go'aamiyo sida ugu saxsan ee suurtogalka ah?
Xanuun ee caloosha - maxaad samayn kartaa?
Guddiga gargarka xarkaha
Echidna - dabeecadda, sida Echidna Giriigga iyo kitaabiga ah sida muuqata
Fibrooadenomatosis naaska - waa maxay?
Khasbada Khachapuri oo leh jiis oo ku yaala digsi qabow
Soo jiidasho galmo
Mooska la jarjaray ee isku dhafan
Calooshaydu miyey soomi doonaan markii aan dhasho?
Munaasabadaha 8-da Maarso